ပြင်ပလူနာ စိတ်ရောဂါကု - လွင်ပြင်ဒေသ စိတ်ကျန်းမာရေးဌာန
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများ
ဆေးဆိုင် - ဂျီနိုအာ
ဤအစီအစဉ်တွင် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ ရနိုင်သနည်း။
၎င်းတွင် သုံးစွဲသူတစ်ဦး စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ဆေးဝါးကုထုံးအမျိုးအစားများကို ဆုံးဖြတ်ရန် အကဲဖြတ်ချက်များ ပါဝင်သည်။
ဆေးဝါးကုထုံးသည် ကုသမှုအစီအစဉ်တစ်ခု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ကုသမှုဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို အမြင့်ဆုံးရရှိရန် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများကို ညွှန်းပေးခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဒီဝန်ဆောင်မှုကနေ ဘယ်သူတွေ အကျိုးရှိနိုင်မလဲ။
ဆေးစာဖြင့်ကူညီနိုင်သော စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာရှိနေသည့် အသက်အရွယ်အားလုံးရှိ လူနာများသည် ဤဝန်ဆောင်မှုမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ပါသည်။ အခြေအနေများတွင် စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်သောကရောဂါများ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းသောရောဂါ၊ စိတ်ဒဏ်ရာ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးချို့ယွင်းမှုများ၊ schizophrenia၊ စိတ်ကြွရောဂါနှင့် အခြားအပြုအမူဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ ပါဝင်နိုင်သည်။
စိတ်ကျန်းမာရေးသည် သင့်ကျန်းမာရေးတစ်ခုလုံး၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတိုချုံးစစ်ဆေးခြင်းများသည် သင် သို့မဟုတ် သင်စိတ်ဝင်စားသူတစ်ဦးသည် စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်နှင့် ချိတ်ဆက်သင့်သည်ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ထိုပထမအဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် သင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် အရေးကြီးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်အနီးနားရှိ ရုံးခန်းကို စာရင်းမှ ညာဘက်သို့ရှာပါ သို့မဟုတ် သွားပါ တည်နေရာစာမျက်နှာ.
ကျွန်ုပ်တို့ကို Toll Free တွင်ခေါ်ဆိုပါ။ 800-325-1192 သို့မဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ info@plainsareamentalhealth.org.
Le Mars၊ အိုင်အိုဝါ ၅၁၀၃၁
အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ- 1.800.325.1192
©2022 လွင်ပြင်ဒေသ စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ၊ အခွင့်အရေးအားလုံး ကန့်သတ်ထားသည်။